Iphosta nenothi lesethulo le-XXX Barcelona Comic Fair | Izincwadi Zamanje
Amarobhothi azongena egumbini lama-30 lebarcel comic
Umncintiswano uzoba nababhali abakhulu abavela kuwo wonke umhlaba
I-30th Barcelona International Comic Fair namuhla imemezele ukubuka kuqala kohlelo lwayo emcimbini obubanjelwe ePolytechnic University yaseCatalonia, kulo nyaka ezoba nesiko, ezokungcebeleka kanye nesayensi lapho kuzobakhona amaRobhothi ngoyinki wabo.
Lo mcimbi, ohlelwe yi-FICOMIC ozoba ngoMeyi 3 kuya ku-6 eFira de Barcelona, ​​usebenzisa ithuba lokugubha usuku lwawo ukukhweza “uhlelo olubabazekayo emlandweni wawo”, njengoba umqondisi womcimbi, uCarles Santamaria, kukhomba. Akusizi ngalutho, phakathi nezinsuku zomncintiswano, kuzokwenziwa umzamo wokuhlanganisa inani elikhulu kunawo wonke lamarobhothi azimele kanye nawomuntu aseke agxila eSpain, ngoba elinye lama-axes alolu hlobo ubuhlobo obuphakathi kwamarobhothi umhlaba wamahlaya nosiko oludumile.
Umbukiso wamarobhothi ngoyinki wawo, ophethwe nguprofesa we-UPC uJordi Ojeda, uzozama hhayi kuphela ukubonisa "indlela amahlaya azame ngayo ukuchaza umhlaba wamarobhothi", ngamagama ka-Ojeda uqobo, kodwa futhi "ukukhuthaza usosayensi onentshisekelo phakathi abantu abasha ”futhi kwenze kucace ukuthi" ama-robotics azoba yisikhathi esizayo ". Kukho konke lokhu, ngeke ibe nombukiso ophakathi nje kuphela, kodwa futhi nemiboniso ehlukahlukene bukhoma lapho izivakashi zingasebenzisana namarobhothi wangempela.
"I-Robotics iyingxenye yenganekwane ebumbene yenganekwane futhi njengoba lapha sinesikhungo samarobhothi esiphayona kubonakale kuwumqondo omuhle ukunikela lolu hlelo lokugubha amarobhothi, futhi sikwazi ukubheka ubulukhuni i-UPC esisinikeze bona". Kusampula kusebenzisana ne-Institute of Industrial Robotics, IRI (CSIC-UPC). U-Alberto Sanfeliu, umqondisi nophrofesa wayo e-UPC, ukhombise ukuthi "amarobhothi azoba nomthelela omkhulu kule minyaka eyishumi" kuze kube sezingeni lokuthi "kwakheke imodeli entsha yezomnotho." IHholo lizokwenza umsebenzi ophindwe kabili wokusabalalisa phakathi komphakathi jikelele nokwakha ubizo lwesayensi.
Phakathi kwezinto ezintsha zoMbukiso, uCarles Santamaria uchaze ngokuchazwa kabusha kwemiklomelo yoMbukiso "ukunciphisa inani lezigaba nokwakha imiklomelo emibili ngesipho esikhulu sezimali ukukhuthaza ababhali nabashicileli bethu." Imiklomelo yeSalon Grand Prize yokuhlonishwa komsebenzi wobungcweti wombhali waseSpain nalowo womsebenzi omuhle wombhali wezwe ngamunye uzoba nama-euro ayi-10.000 endowment. Ngaphezu kwalokho, ukugubha usuku lokukhumbula lo Mbukiso, bonke abazalwa ngo-1982, okungukuthi, abazoba neminyaka engama-30 kulo nyaka, bazokwamukelwa mahhala.
Mayelana nohlelo lwesikhashana, uchaze ukuthi kuzonikezwa umbukiso eminyakeni engama-50 yokuphila kukaSpiderman, omunye wamaqhawe aziwa kakhulu emhlabeni. Amasampula azophinde anikezelwe kulabo abawine imiklomelo yanyakenye, njengeJordi Longarón's Grand Prize kuComic Fair 2011, ogama lakhe lihlotshaniswa nochungechunge oludumile i-Hazañas Bélicas; UJuanjo Guarnido, umdwebi wamakhathuni weBlacksad; noma uPaco Roca, owine izindondo zeBest Work neBest Screenplay nge-El Invierno del Drama futhi ophinde abe ngumbhali weposta yokuqala yalo nyaka.
URoca uqinisekise ukuthi le poster, lapho umdwebi wekhathuni kanye nomfundi kungabonakala babelana ngamahlaya afanayo, “ihlose ukukhombisa izinhlangothi zombili zeshidi elilodwa, umculi nomfundi. Akekho ngaphandle komunye futhi indawo abahlangana kuyo ilona kanye iHholo ”, esho. Lo mbhali owaziwayo ukhumbula isikhathi lapho naye uqobo "wayesengumfundi" futhi waya "eSalon ukuyohlangana nababhali ayebathanda." Ukuveza ngezansi ukuthi "manje ithuba elihle lokuhlangana nalabo abangifundayo." URoca ufake inkanyezi kwesinye sezikhathi ezimnandi zomcimbi lapho, ngosizo lwerobhothi uTibi, ethola iphosta lomncintiswano. UPaco Roca kumanje usematasa ngokuqokwa kweGoya Award yefilimu egqwayizayo ethi Wrinkles ngokususelwa kumakhomikhi akhe.
Ngokwakhe, umongameli we-Gremi d'Editors de Catalunya ne-FICOMIC, u-Xavier Mallafré, uqinisekise ukuthi i-Show iyaqhubeka nokujabulela "impilo enhle" futhi ngalowo mqondo, "ubungqabavu obenomona, amandla kanye nokuqagela kwangaphandle". Ngaphezu kwalokho, ukuqinisekisile ukuthi "amahlaya ayindlela ebaluleke kakhulu yokwenza abafundi abasha." UPere Mayans, omele uMnyango wezeMfundo eGeneralitat de Catalunya, uvumelane noMallafré ngokuveza ukuthi ikhomikhi "ingasiza ekuthuthukiseni imiphumela yabafundi bethu", ngoba "inikela ngezindlela ezingaphezu kweyodwa zokufunda." Ubuye wengeza ukuthi "lona unyaka wesihlanu ulandelana ukuthi sisebenzisane neComic Fair futhi sijabule kakhulu ngalobu budlelwano ngoba sithatha ikhomikhi njengethuluzi elibaluleke kakhulu lokufundisa."
Uhlu lwesikhashana lwezivakashi zakwamanye amazwe lubandakanya ababhali abaziwayo njengoGo Nagai, umdali weMazinger Z; UMilo Manara, omunye wabaphathi bamahlaya aseYurophu; UGuy Delisle, umbhali wamanoveli anemifanekiso efana noPyongyang nethi Chronicles of Jerusalem; noSergio Aragonés, okudala kusuka kumagazini i-MAD. Ababhali abavelele be-DC superhero revolution bazobe bekhona njengoPaul Cornell, umbhali weDoctor Who kanye nochungechunge olusha lwe-Action Comics; URags Morales, umdwebi wekhathuni we-Action Comics; noScott Snyder, umbhali wochungechunge olusha lweBatman neThe Swamp Thing.
Umbukiso wesekwa yiGeneralitat de Catalunya, iBarcelona City Council kanye noMnyango Wezemfundo, Amasiko Nezemidlalo. Ngaphezu kwalokho kulo nyaka umncintiswano uthatha ukusebenzisana neFrance Institute of Barcelona. Umbukiso uzobanjelwa esigodlweni esingunombolo 8 esizeni iFira ​​de Barcelona, ​​lapho uzothatha khona amamitha-skwele ayi-19.000. Lona unyaka wesishiyagalombili olandelanayo wenzeka eFira de Barcelona.
Sikukhumbuza ukuthi isikhathi sokucela ukugunyazwa kweComic Fair sivulekile. Lokhu kuzophela ngoMsombuluko ngo-Ephreli 23, usuku okungeke kusacutshungulwa ngalo ukuphasa. Ukucela ukugunyazwa kuyadingeka ukuhlinzeka yonke imininingwane yalokhu okuphakathi, kanye nokufakwa okwenziwe ngonyaka odlule. Endabeni yokuba unyaka wokuqala ukuhambela i-Show, kuyadingeka ukuthumela umsebenzi osanda kushicilelwa ohlobene namahlaya noma isiko. Silindele usizo lwakho. Ukuze uthole ukucaciseleka, ungangabazi ukuxhumana nathi noma uthinte iwebhusayithi yethu ethi www.ficomic.com. Ngiyabonga kakhulu ngokunaka kwakho.
Cindezela / FICOMIC
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » Iphosta nenothi lesethulo le-XXX Barcelona Comic Fair
Eyodwa ezophuma endleleni yayo yokuya kulo nyaka!
Yeka umkhosi wababhali nemibukiso, wenza umlomo wami ungamanzi.